Okulandelayo | Izinhloso Zokuthuthuka KwamaTimu
Indawo yokusebenza yesikhathi esizayo idinga amaqembu amukela indlela yobuholi okwabiwe ngayo.
I-NextMapping ™ yamaqembu isiza ekwakheni izinhloso zokuthuthuka kwezobuciko, amandla obugqwetha nokubona kusengaphambili.
Ngokuzayo impumelelo yeqembu kuzoba yikhono labo lokuzilawula. ”
I-NextMapping ™ Amaqembu Alungele Isikhathi Esizayo - Wakha Kanjani Amaqembu Agile, Aguquguqukayo Namaqhinga
Leli kusasa lesisho eliyisiqalo seqembu linikeza ucwaningo namasu ngekusasa lamaqembu nokuqonda ukuthi iqembu lihlangana kanjani nokuphazamiseka kwesikhathi sangempela nezidingo zomhlaba oshintsha ngokushesha. Ucwaningo lukhombisa ukuthi amaqembu amancane anabantu abagqugquzelekile futhi abazibandakanyayo ayakwazi ukwenza futhi enze ngokushesha okukhulu. Umthelela ebhizinisini elinamaqembu aphezulu enza imibono ngokushesha ukumaketha, ukuxazulula izixazululo zesipiliyoni seklayenti futhi inzuzo yokuncintisana ekugcineni.
Ukuthuthukiswa kwamakhono okulungele ikusasa lamaqembu
Amaqembu anezinhloso nezinselelo eziyingqayizivele zokuthuthukisa amakhono njengoba zisebenzela ukudala imiphumela engafani namakhasimende kanye nenkampani. Lezo zinselelo zibandakanya ukuzivumelanisa neqiniso elisheshayo elilandelwa ushintsho oluqhubekayo, ukusebenza ngokubumbana nobuntu obuhlukile, izizukulwane ezihlukile, amaqembu akude nemibono ehlukahlukene. Indlela yethu eyingqayizivele yomqeqeshi ekusizeni amaqembu ukuzulazula 'okulandelayo' ihlinzeka ngohlelo lwethu lokuthuthukisa ubungcweti be-NextMping ™ amaqembu ahola phambili phambili kuguquko oludingekayo ukuze alungele ikusasa manje.
Ikusasa lomsebenzi online
Esikhathini esizayo somsebenzi wonke umuntu uzoba ngumholi osebenza kwisiko lobuholi okwabiwe ngalo. Lokhu akusho ukuthi kunesixuku sonke sabantu abaneziqu zobuholi - kusho ukuthi isiko ngokwalo ligxile kuwo wonke umuntu othwala umthwalo wemfanelo ophelele wemiphumela, wokwakha amakhono we-'magraphyurial 'kanye nokukhulisa ikhono lomuntu ngamunye lokubambisana nokwakha ngejubane elisheshayo. Ikusasa lethu eliku-inthanethi lomsebenzi wokuthuthukisa umsebenzi wobuchwepheshe lisuselwa kuvidiyo futhi lingathathwa noma lingasekelwa umqeqeshi.
Yakha i-NextM Map yakho™ hlela amaqembu
Amaqembu ahlanganiswe ngabantu futhi abantu bahlukile. Izinhloso zokukhulisa ubuchwepheshe zamaqembu ngokuzayo emsebenzini kubandakanya ukuthuthukisa isimo sengqondo 'sami ku thina'. Ukusebenzisana kweqiniso kuqukethe wonke umuntu owakha ukuzazisa, ukuzihlola, kanye nekhono lokuqonda. Ngenqubo yokubonisana ye-NextMping ™ sisiza ukuhlola amandla abantu emaqenjini, sihlola amandla weqembu njengeqoqo futhi sinikezela ngezixazululo namasu amaqembu ukuthi akwazi ukusebenzisana ngokubheka kakhulu, ugqozi kanye nokusebenzisana.
Thuthukisa ukusebenzisana kweqembu
Amathimba asebenza ngamandla amakhulu kunanini ngaphambili, isikhathi esibekiwe, okuhlosiwe okukhulu kanye nengcindezi eqhubekayo yokwenza okuningi. Imvamisa amaqembu ancipha emisebenzini nokuthi yini okudingeka yenziwe namhlanje futhi akuvamisile ukuthola ithuba lokugxila ekwakheni nasekulungiseleleni ukuphazamiseka okungase kube khona. Ngokuqeqeshwa kwethu kwe-NextMping ™ kwamaqembu sinikeza amathuluzi nohlelo lokuthuthuka lwe-NextMiling ™ lokusiza amalungu eqembu ukubona ikusasa, ngokuqhamuka nezixazululo ngokwakha ubuhlakani futhi akhe izindlela amaqembu angasebenzisana ngazo.
Sikukhulumile - thola kabanzi mayelana nokuthi ungawakha kanjani amaqembu alungele esikhathini esizayo emsebenzini - finyelela lapho singathanda ukuxhumana nawe.